Muuse Biixi: Xamar waxaan u aragnaa cadow maadama ay diideen qarannimadeena - Tilmaan Media
Muuse Biixi: Xamar waxaan u aragnaa cadow maadama ay diideen qarannimadeena
Madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaannida ee Somaliland, ayaa sheegay in Somaliland ay cadow u aragta dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxa uuna sheegay inysan dowladiidsa raali ka noqon doonin in gargaar loo soo marsiiyo Muqdisho.
Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta ka hadlayay sannad guurada 18-ka May oo ku beegan xilligii Somaliland ku dhawaaqday inay ka go’day Soomaaliya, isla markaana tahay dal madax bannaan.
”Cidwalba oo gar-gaar Somaliland siineysa waan soo dhaweyneynaa balse marnaba aqbali mayno gargaar amaba dhaqaale noo soo maro Soomaaliya, cidda dooneysa iney wax nagu taageerto inaga si toos ah ha noo soo mariso,” ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi.
”Xamar waxaanu u aragnaa cadaw sababtoo ah waxa ay diidan tahay qaranimadeena”.
Waxa uu sheegay in mar walba mowqifkooda yahay mid cad oo ay iyaga iyo Soomaaliya yihiin labo dal oo deris ah.
Muuse Biixi ayaa sheegay in haddii la rabo in wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland noqdaan kuwo dhab ah ay marka hore shardi tahay in sidii labo dowladood oo kale loo wada hadlo.
Waxaa uu sheegay in aysan wada xaajood la geli doonin dowladda Soomaaliya, “inta mas’uuliyiinta Muqdisho joogta ay ugu yeerayaan Somaliland Gobolada Waqooyi ee Soomaaliya”ayuu yiri.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in wada hadalka labada dhinac ay tahay in laga heshiiyo ajanadaha kaga wad ahadlayo, waxaana uu xusay in mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya aaminsan yihiin in midnimo oo keliya laga wada hadli karo, halka Somaliland aaminsan tahay in kala go’ oo keliya laga wada hadlo.
Waxaa uu soo jeediyay in haddii dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ay wada hadalka ku heshiin waayaan in la tago maxkamad caalami ah, si ay ukala saarto.
”30 sanno waanu wada joognay 30 kalana waanu kala maqnayn, marka waxaa iga dhaadhici la’ inamada yar-yar ee Xamar jooga ee oranaya inta ay telefishinada soo istaagaan Hargeysa ayaan mashuuc ka fulineyna taasi waa cadaawad hor leh oo la abuurayo,” ayuu yiri Muuse Biixi.
Madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku soo gebagabeyay in guusha Soomaaliland ay dhawoday ay dadkuna dhabar adaygaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku adkeysaneysa in Somaliland ay tahay gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya. Waxaa jriay wadahallada u dhexeeya labada dhinac oo sanadihii dahwaa ka dhacay dalal ay ka mid yihiin Turkiga iyo Jibuuti.
Wadahadallaadaasi ayaa hakad ku yimid dhowrkii sano ee la soo dhaafay iyo labada dhinac uu mdiba kan kale ku eedeynaya dib u dhaca wadahadallada.
Isha Warka: BBC SOMALİ
Bukaannada Ka Bogsoonaya Feyruska Karoona Oo Kordhay
Axmed Madoobe shir la qaatey Ergada Beesha Caalamka ee Soomaaliya